Iindaba - Ngaba isilawuli somdlalo oshukumayo sikulungele ukuthenga?
Ngaba umlawuli womdlalo weselfowuni ufanele ukuthengwa?
Ngaba kufanelekile ukuthenga? Kuxhomekeka kumdlalo owudlalayo kwaye kutheni usitsho ngenxa yengxaki yokulungiswa. Uninzi lwemidlalo ehambayo kwimarike ayinayo iadaptha yemveli yokusebenza. Ngamanye amagama, awungekhe ukwazi ukuyisebenzisa ukudlala umdlalo ofuna ukuwudlala xa uthenga isilawuli kwaye ubuye umva. Njengokuba ezinye izitshixo zinokufakwa kumngxunya wendlu yakho, kodwa azinakuvula umnyango wendlu yakho. Ewe, akukho ndlela yakusombulula. Kule mihla, uninzi lwabalawuli bomdlalo oshukumayo lubonakalisiwe kwisoftware, ukuze ukusebenza komlawuli kube nokulinganisa ukusebenza kwescreen sokuchukumisa. Nangona kunjalo, le ndlela ineengxaki. Inani lamaqhosha kwisiphatho lilinganiselwe. Eminye imidlalo yeselfowuni kufuneka icofwe ngakumbi kunamaqhosha esiphatho, kwaye imidlalo yeselfowuni yenzelwe ukusebenza kwescreen sokuchukumisa ngexesha lophuhliso. Ngokusebenzisa isoftware yokulinganisa, akukho ndlela yokuba yendalo njengescreen sokuchukumisa.
Nokuba kufanelekile ukuthenga, kuxhomekeke ekubeni uzimisele na ukuphosa
Kutheni le nto abantu abaninzi bathanda ukudlala imidlalo yeselfowuni? Kungenxa yokufumaneka kweefowuni eziphathwayo. Iifowuni eziphathwayo zazisetyenziswa njengezixhobo zonxibelelwano eziphathwayo, kwaye ngoku ziziikhompyuter ezincinci. Ngeemfonomfono eziphathwayo, abantu abanakuthumela kuphela imiyalezo nanini na kwaye naphi na, kodwa bathabathe nemifanekiso babukele iimovie. Ukumamela umculo, ukudlala imidlalo, kunye nomsebenzi olula ungenziwa kwiselfowuni. Ngesiphatho esinye, ifowuni ayinakulunga epokothweni yakho. Ngesiphatho esinye, kuya kufuneka uchithe ixesha lokufunda useto ngaphambi kokudlala. Ezi ngxaki ngokungathandabuzekiyo zinciphisa kakhulu ukusebenziseka kwemidlalo ehambayo.
Ngenxa yezi ngxaki, kutheni umntu ephuhlisa isilawuli somdlalo oshukumayo?
Oku kuthetha malunga nezibonelelo zokubamba xa kuthelekiswa neglasi. Ukucofa umpu omnye, isitshixo esinye sokudibanisa kunye nokunye "ukusebenza kwe-sao" ezichaphazela intsalela yomdlalo ophunyezwa kwisoftware kwintengiso, masingathethi ngayo. Xa kuthelekiswa nokuhlikihla iglasi, kukho amaqhosha omzimba, ekulula ukuwenza ngokungaboni (sukujonga indawo amaqhosha asebenza kuyo), kwaye iminwe ayikho kwiscreen, esingayi kuthintela ukujonga komdlalo. Ewe, ukuba umdlalo uhlengahlengiswe kakuhle, kuya kuba lula ngakumbi ukusebenza ngesiphatho kunokurabha iglasi.
Ixesha Post: Oct-16-2021
Idilesi:Igumbi lama-2214, ulwakhiwo lwamazwe aphesheya kweFenlin iLonggang Avenue, Longgang, Shenzhen, China